Kiraro mareva-doko eo amin'ny menaka fisaka
Fantatra fa efa antitra efa ela ny zava-drehetra vaovao, ary miverina amin'ny lamaody ny kiraro miaraka amin'ny orona voapotsitra eo amin'ny menamena! Marina fa misy lafiny miavosa amin'ny vola madinika: amin'ny kiraro toy izany, tsy ny vehivavy rehetra no hahatsapa hafaliana. Saingy, inona marina ny mpihaza rehetra dia hahatsapa fa vehivavy tsy manam-petra, be voninahitra.
Dune . Ny marika britanika dia mamorona modely kiraro mahavariana natao ho an'ny fitsangatsanganana ao amin'ny birao, fa koa amin'ny fandehanana eny an-dalan'ny tanàna tianao indrindra. Fihetseham-po sy trano lafo vidy amin'ny vidiny sarobidy - azo atao izany.
Ted Baker . Ny famoronana marika rehetra dia manana fepetra sasantsasany. Ny "Zest" dia ao amin'ny tsipiriany madinika indrindra, mozika mareva-doko. Izany ihany no misy kiraro loko mainty misy sôkôla miaraka amin'ny tsangambato volamena!
New Look . Ny fomba an-dalambe dia afaka manome loharanom-panahy maro. Ny porofo lehibe indrindra amin'izany - ny famoronana ny Londres namorona ny marika malaza. Ny modely tsirairay dia noforonina noho ny fironana lamaody farany. Ary izany dia maneho fa ny ankizivavy tsirairay dia hijery tsara amin'ny kiraro miaraka amin'ny tebiteby maranitra.
Christian Louboutin . Iza no tsy te-hanandrana ny hatsaran-tarehin'ny mpanjaka amin'ny kiraro? Ny kiran-kena voafantina nasehon'ny Labuten dia nanolotra ny foto-drafitrasa loko mainty sy fotsy, fa koa amin'ny printy leopard .
Inona no tokony hataonao amin'ny kiraro maina?
Noho izany, raha te-hamorona sarimihetsika tsara tarehy ianao, ny mpanakanto dia manoro anao hanamboatra akanjo sy akanjo miaraka amin'ny kiraro eo amin'ny valizy. Ankoatra izany, ny kiraro toy izany dia tsara amin'ny akanjo rehetra. Izany dia mihatra amin'ny fomba sy ny halavany. Aza amboarina amin'ny kiraro beigeza amin'ny kirarony. Ity modely ity dia hanampy amin'ny fijery maivana kokoa. Raha mampifangaro azy amin'ny pataloha vita amin'ny tapa-tady, dia toy izany no ahafahanao manantitrantitra ny silhoueta mendrika.
Ny akanjom-behivavy vehivavy
Akanjo lava fohy avy amin'ny mink
Shoes Ash - modely tsara indrindra amin'ny marika malaza
Jacket tsy misy akanjo
Ahoana ny fomba hananana mpanangom-bokatra amin'ny taratasy?
Ny ra ao amin'ny ra - ny fitsipika amin'ny vehivavy
Mialà amin'ny volana Oktobra any ivelany - any aiza?
Ahoana ny fomba hanesorana ny hatsiaka?
Noho ny fitsaboana kankana amin'ny saka?
Inona no azonao atao amin'ny melon?
Ahoana no fanaovana taratasy baoritra?
Ahoana no hisarihana ny sain'ny olona tianao?
Diphtheria - soritr'aretina, antony marary, fisorohana sy fitsaboana
Vitamina ho an'ny hoditra